भरी बन्दागोभी - एक परम्परागत पूर्वी युरोपेली व्यञ्जन। तर, यसको analogues एशियाली भोजन मा अवस्थित। कसरी कोरियाली बन्दागोभी रोल पकाउन यो पकवान, के हो? लेख मा पढ्छौँ।
पूर्व-युरोपेली भोजन को एक रोचक बिन्दु
जमीन मासु भात, अनाज वा मकै grits संग मिश्रित र ताजा वा मसालेदार बन्दागोभी पात मा र्याप: तपाईं रेस्टुरेन्ट मा भरी बन्दागोभी आदेश निर्णय भने, निम्नानुसार तिनीहरूले परंपरागत तयार छन् भन्ने थाहा छ। त्यसपछि अर्ध-समाप्त उत्पादन एक पाक पाना वा ठूलो केतली मा राखिएको छ, थप्न एक मलाईदार टमाटर सस खन्याउन, सुनको खैरो प्याज र गाजर सम्म तला "टाउको संग।" लेदो, स्वाद खाडी पात थप्न नुन र मरिच थप्न आवश्यक पहिलो हो। समय समयमा Refilling पानी गरेका सम्म पछि निभाउन।
त्यहाँ बन्दागोभी खाना पकाउने लागि विभिन्न विकल्प छन्: दाखको बोट, चुकंदर वा जवान प्रयोग गर्न सकिन्छ सहिजन को पात, कीमा बनाएको तरकारी मशरूम, cracklings वा जौ थप्न को एक किसिम को लागि यो मा हुन सक्छ। तर कुनै पनि मामला मा, युरोपेली संस्करणमा दोस्रो पकवान छ। तर एशियाली बन्दागोभी रोल मा - एक मसालेदार खाजा। कसरी बन्दागोभी रोल खाना पकाउनु कोरियाली? यस नुस्खा तल वर्णन गरे।
मसालेदार एसियाली appetizer: igredienty
कोरियाली कुक बन्दागोभी रोल कार्य र अनुभवहीन kulinarka सामना गर्न धेरै सजिलो छ। यो तपस लागि उत्पादन सजिलो र निकटतम बजार वा कुनै पनि सुपरमार्केट मा किन्न सस्तो छ, सबै भन्दा साधारण आवश्यक छ।
कोरियाली तीव्र बन्दागोभी लागि त सामाग्री:
सेतो बन्दागोभी - 1 ठूलो टाउको;
गाजर कोरियाली - 0.5 किलोग्राम;
वनस्पति तेल (कुनै पनि उपयुक्त, तर यो एक सूरजमुखी लिन राम्रो छ) - 70-100 एमएल;
सिरका9प्रतिशत - 50 एमएल;
साधारण नुन (iodized छैन) - 1 चिम्टी;
चिनी चुकंदर - स्लाइडहरू बिना2चमचा।
एक ठूलो पट फोडा पानी मा, cobs बन्दागोभी टाउको (पूर्व-कट) बिना3मिनेट त्यहाँ राख्नु र सुन्दर पछि यसलाई हटाउन। को बन्दागोभी सुन्दर छ जब, तपाईं ध्यान दिएर यो व्यक्तिगत पात मा अलग लिनु आवश्यक छ।
पातहरुमा कोरियाली गाजर राख्न र भर्नको एक छेउमा "हेर्न" छ भनेर ध्यान दिएर राख्यो। को बन्दागोभी पात भने दुई भागमा, बीचमा एक नस हटाउने, एक कोरियन एउटा सानो भरी बन्दागोभी हासिल पूर्व-कट। यो राम्रो काम!
अब तपाईं एक स्वादिष्ट marinade पकाउन गर्न आवश्यक छ। ठूलो क्षमता, सिरका र वनस्पति तेल खन्याउन नुन र चिनी थप्न पानी आधा लीटर जोश। चिनी सम्म सबै चलाउनु भंग भएको छ। फेरि जोश, र त्यसपछि ध्यान तातो marinade बन्दागोभी रोल खन्याउन। आफ्नो प्लेट र (जस्तै, पानी को आधा-लीटर जार) लोड राख्न शीर्ष कवर। 10 घण्टा कोठा तापमान मा को लागि छोड्ने, त्यसपछि एक दिन को लागि फ्रिज मा राखे। 24 घण्टा पछि, पकवान तयार छ, तपाईं टेस्टिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं समाप्त कोरियाली गाजर किन्न र घर मा खाना पकाउन गर्न सक्दैन। यो सजिलो छ। पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री 4-5 मध्यम आकार गाजर, र विशेष मसला एक प्याक (हरेक किराना पसल बिक्रि) आवश्यक हुनेछ।
Purified गाजर एक विशेष वा नियमित भद्दा grater मा RUB गर्न आवश्यक छ। मसला पोख्नुहोस्, पानी को 1 चम्मच खन्याउन, राम्ररी मिश्रण र एक घण्टा छोड्नुहोस्।
यसलाई थप्न यदि कटा लसुन (4-7 लौंग), र सूक्ष्मता कटा ताजा जडीबुटी (डिल, साग, cilantro), जीरा अझै piquant भर्ने सफल।
भराई को तयारी को अर्को संस्करण
खुली र coarsely कसा भयो गाजर (4-5 टुक्रा) सुनको खैरो सम्म वनस्पति तेल मा तलना गर्न आवश्यक छ। म एक अलग गहिरो कचौरा राखेँ पछि। स्लाइडहरू बिना चमचा, आधा चम्मच जमीन धनिया, मरिच को एक राम्रो पिन्च, कटा लसुन, एक ठूलो टाउको - नुन थप्नुहोस्। सबै मिश्रण राम्ररी र कोठा तापमान मा Infuse गर्न छोड्नुहोस्। बीस मिनेट पछि, एक स्वादिष्ट भर्ने तयार छ। तपाईं कोरियाली मा भरी बन्दागोभी र्याप गर्न सक्नुहुन्छ!
धेरै सजिलो नुस्खा
मसालेदार कोरियाली नाश्ता लागि क्लासिक नुस्खा एक दिन कम्तीमा लाग्छ। र के भने रात यात्रा आउनु पर्छ, र पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री दिलकश नाश्ता कोरियाली गाजर संग भरी रूपमा लागू गर्न चाहन्छ? त्यहाँ एक तरिका हो। तपाईं ultrafast निर्धारण लागि यो पकवान तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो, तपाईं5ठूलो गाजर, बन्दागोभी टाउको व्यक्तिगत पात मा disassembled अंगीठी गर्न आवश्यक छ। अर्को, माथि वर्णन रूपमा marinade तयार। यहाँ एक गाजर र बन्दागोभी पात राख्दै छ, यो जोश। बिस्तारै हलचल र 20 मिनेट मा छोड पछि marinade पात हटाउन। को गाजर सकिन, यो लसुन को 1-2 चोट लौंग थप्नुहोस्। बन्दागोभी मा र्याप भराई फेरि एक गहिरो कन्टेनर मा जोडेको र खन्याउन जुन तातो marinade रोल को रूप मा छोड्छ। कोठा तापमान मा Infuse गर्न छोड्नुहोस्। एक घण्टा पछि, कोरियाली बन्दागोभी तयार गाजर संग रोल! कुल, आफ्नो तयारी 1.5-2 घन्टा लाग्छ।
अब तपाईं कसरी कोरियाली मसालेदार मा बन्दागोभी रोल पकाउन थाहा छ। खानपान!
विवरण कुल "Varfeyse"। "Varfeys" clans
भाषा leukoplakia: कारण, लक्षण, उपचार
बच्चाहरु लागि ठाउँ के छ? ठाउँ र अन्तरिक्ष यात्री बारेमा बच्चाहरु
को चुच्चा कट्टर के हो? भवन arches
द्वितीय विश्व युद्ध को जर्मन यू-डुङ्गा: तस्वीर र विनिर्देशों